मुद्रण विभागले करोडौं मूल्य पर्ने योजनाविहीन सुरक्षण छपाइ मेसिन सेक्युरिटी पिन्ट्रिङ प्रेस खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ । पहिला सुरक्षण मुद्रणालयका नाममा टेन्डर आह्वान गर्ने गरिएकामा यसपल्ट मुद्रण विभागले नै सो आह्वान गरेको छ । मौजुदा छपाइ मेसिनको समेत नाफामुखी उपयोग हुन नसकिरहेको अवस्थामा मेसिन खरिदका लागि टेन्डर आह्वान हुनुले थप आशंकाहरु उब्जाएको छ ।
यसअघि पनि डानिडाको अनुदान सहयोग र एसियाली विकास बैंकबाट कर्जा लिई रु. १४ करोड पर्ने मेसिन खरिद गरिएको छ । त्यसबाट सरकारको वार्षिक बजेट तथा गजेटमात्र छाप्ने गरेको बताइएको छ । एलएलसी तथा ११ र १२ को प्रश्नपत्रको सुरक्षण मुद्रण हुनुपर्नेमा सो काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग समन्वय गरी सोही छापनाखानाबाट हुनुपर्ने भनिएकामा गत वर्ष पनि सुरक्षाकै कारण देखाई प्रश्नपत्रहरू भारतमा छापिएका थिए । सुरक्षण मुद्रणालयका लागि भनी रू. १० करोडको भवन निर्माण गरिएको छ तर त्यो हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । हरेक वर्ष मेसिन मर्मतसम्भारका लागि लाखौं खर्च हुने गरेको छ ।
यता अत्याधुनिक मेसिन खरिद गरेपछि त्यसको सञ्ञालनका लागि दक्ष कामदार आवश्यक पर्छ । जानकारहरुका अनुसार मेसिन सञ्चालन गर्न दुई जना दक्ष कमादार पर्याप्त हुन्छ । तर यो कामका लागि विभागले ४० जना कर्मचारी राख्ने र तीमध्ये १० जनालाई विदेशमा प्रशिक्षण लिन पठाउने तयारी गरेको बताइएको छ । यसरी विदेश पठाउँदा हाकिमका आसेपासेलाई पठाइने गरिएको छ र सोको खर्च समेत मेसिन खरिदमा गाभिने गरेको छ ।
[Sep 26, 2021 03:36am]
लुट्न सम्म लुट... थुक्क!!! लुटेराहरु... धन्यवाद।